नविलको चार्डपर्व योजनासहित नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुनमा कति ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
नविलको चार्डपर्व योजनासहित नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, कुनमा कति ?
नबिल बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनीक गरेको छ । बैंकले नेपालीहरुको महान पर्व आउँदै गरेको समयमा नविल चार्डपर्व योजना अन्र्तगत रहेर नयाँ ब्याजदर सार्वजनीक गरेको छ । सार्वजनीक नयाँ व्याजदर अनुसार १३ देखि २४ महिना सम्मको व्यक्तिगत मुद्दती खातामा ग्राहकहरुलाई बार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ ।
त्यस्तै गरी १ वर्ष सम्मको मुद्दती खातामा बैंकले ८.५ प्रतिशत र २ भन्दा माथि ५ वर्ष सम्मको व्यक्तिगत मुद्दती खातामा बार्षिक ९.२५ प्रतिशत ब्याजदर र ५वर्ष भन्दा माथि व्यक्तिगत मुद्दती खातामा बार्षिक ९.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ ।
साथै बैंकले घर कर्जामा ७.४९ प्रतिशत धितो कर्जामा र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टमा ७.९९ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । यसैगरी साना तथा मझौला कर्जामा १ करोड सम्मको कर्जामा ७.४९ प्रतिशत र १ करोड भन्दा माथिको कर्जामा ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यो योजना अन्र्तगतका कर्जामा एक वर्षसम्म ब्याजदर परिर्वतन नगरिने समेत बैंकले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : आश्विन १, २०७७ बिहीबार १ : ४० बजे